On1.click | အမ်ပဲဒါကလီးဇ်
... ဇ် သည် ဆိုကရေးတီး မတိုင်မီ ဂရိအတွေးခေါ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်၍ စစ္စလီကျွန်းရှိ အ...
၁၇ ရာစု ရုပ်ပုံမှ အမ်ပဲဒါကလီးဇ်
မသိရှိ [မှတ်စု 1]
စကြာဝဠာဇာစ်မြစ်, ယထာဘူတသဘောတရား, အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ဒဿန
အရာရာကို ဓာတ်လေးပါးဖြင့်ဖွဲ့သည်။ မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ မီးတို့ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲမှုနှင့် ရွေ့လျားမှု တို့သည် အထည်ဒြပ်၊ ချစ်ခြင်းတရား၊ (အဖရိုဒိုက်တီ) နှင့် ပဋိပက္ခတရား တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဆဲလ်တို့၏ အသက်ရှုခြင်းသဘောတရားများ (ရေဖြင့် အချိန်တိုင်းကိရိယာစမ်းသပ်ချက်)
ပါမန်းနစ်ဒီးဇ်, ပိုက်သာဂိုရပ်စ်ဝါဒ, Alcmaeon of Croton
Gorgias, ဆိုကရေးတီး Critias, အရစ္စတိုတယ်, လူးခရီးယပ်စ်, Friedrich Nietzsche
အမ်ပဲဒါကလီးဇ် (အင်္ဂလိပ်: Empedocles /ɛmˈpɛdəkliːz/; ဂရိ: Ἐμπεδοκλῆς တမ်းပလိတ်:IPA-grc, Empedoklēs; c. 494 – c. 434 BC, fl. 444–443 BC) သည် ဆိုကရေးတီး မတိုင်မီ ဂရိအတွေးခေါ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်၍ စစ္စလီကျွန်းရှိ အကရာဂါ့စ်မြို့သားတစ်ဦးဖြစ်သည်။  အမ်ပဲဒါကလီးဇ်၏ အတွေးခေါ်များသည် ဓာတ်ကြီးလေးပါးဆိုင်ရာ စကြဝဠာ၏ ဇာစ်မြစ်သဘောတရားများ စတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းက ချစ်ခြင်းတရားနှင့် ပဋိပက္ခတရားနှစ်ခုတို့သည် ဓာတ်များကို ရောနှောစေသည်၊ ကွဲကွာစေသည်ဟု အဆိုပြုခဲ့လေသည်။
ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်၏ ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိကာ ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်ဝါဒီဖြစ်သော အမ်ပဲဒါကလီးဇ်သည် တိရစ္ဆာန်ယစ်ပူဇော်မှုဓလေ့၊ အစားအစာအတွက် တိရစ္ဆာန်သတ်ခြင်းများကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီး ထင်းရှားခဲ့သော ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းဆိုင်ရာ အယူဝါဒကို ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့သူလည်းဖြစ်၏ ။ ၎င်း၏ စိတ်ကူးအယူအဆများကို စကားပြေဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော နောက်ဆုံးဂရိဒဿနပညာရှင်ဟု ယေဘုယျအနေဖြင့် ယူဆကြလေသည်။ ၎င်း၏ လက်ရာအချို့ရှင်သန်ကျန်ရစ်ရာ ဆိုကရေးတီးမတိုင်မီ အခြားသောသူများ၏ လက်ရာများထက် ပိုများကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမ်ပဲဒါကလီးဇ်၏ သေဆုံးခြင်းကိုပင် ရှေးခေတ်စာရေးဆရာများက ဒဏ္ဍာရီသဖွယ် တင်စားခဲ့ကြပြီး များစွာသော စာပေလက်ရာများ၏ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်လည်းဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။
12Wright၊ M. R. (1981)။ Empedocles: The Extant Fragments။ Yale University Press။ p. 6။
12345 Burnet 1930, pp. 202–203.
↑ Burnet 1930, p. 198.
↑ Zeller၊ Eduard (1881)။ A History of Greek Philosophy from the Earliest Period to the Time of Socrates။ II။ ဘာသာပြန်သူ Alleyne၊ S. F.။ London: Longmans, Green, and Co.။ pp. 117–118။
↑ Burnet 1930, p. 197.